४५ खेलपछि कमजोरीको कीर्तिमान, बार्सिलोनामा के बिग्रियो?
नेपाल लाइभ बुधबार, कात्तिक २०, २०७६, १०:४७
काठमाडौं- बार्सिलोनामा केही पनि राम्रो देखिँदैन। मैदानमा पनि उस्तै निराशाजनक। मंगलबार राति च्याम्पियन्स लिग खेलमा त बार्सिलोना घरेलु मैदानमा ४५ खेलपछि गोलविहीन भयो। लियोनल मेस्सीको एक प्रहार पोस्टमा लागेर फर्कियो, स्लाभिया प्राहाका गोलकिपर कोलारको चलाखीले अरु केही अवसर खेर गए।
कप्तान मेस्सीलाई कमजोर बनाउन सक्नु स्लाभियाको बलियो खेल हो या बार्सिलोनाकै नमिलेको तालमेल? बार्सिलोनासँग फुटबल समर्थकको जे आश हुन्छ त्यो पूरा भएको छैन। चाहे ला लिगामा होस् या च्याम्पियन्स लिगमा। घरेलु मैदानमा बलियो हुने र अवे मैदानमा कमजोर हुने आरोप लागिरहेको बार्सिलोना अहिले त क्याम्प नाउमै कमजोर देखिएको छ।
क्याम्प नाउमा च्याम्पियन्स लिग खेलमा पछिल्लो ४६ औँ खेलमा आएर गोलविहीन बनेको बार्सिलोनामा कप्तान मेस्सीले २०१५ को अप्रिलपछि घरेलु मैदानमा गोल गर्न सकेनन्। यसैले मेस्सी र बार्सिलोनाका प्रशंसक रहेका इंग्लिस क्लब आर्सनलका पूर्व प्रशिक्षक आर्सन वेंगर भन्छन्– ‘बार्सिलोनाले आफ्नो प्रतिभा बिर्सिएको छ। मेस्सीमा मात्रै बढी भर पर्दा उनीसँगै अरु खेलाडी कमजोर देखिएका छन्।’
हुन त बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग खेलमा घरेलु मैदानको अपराजित यात्रामा कीर्तिमान बनाएको छ। पछिल्लो ३४ खेलमा ३० खेल जितेको छ भने ४ खेल बराबरी गरेको छ। जुन च्याम्पियन्स लिगमा घरेलु मैदानमा सबैभन्दा धेरै खेलमा अपराजित रहने कीर्तिमान हो। तर बार्सिलोनाको कीर्तिमानभित्रको कमजोरी डरलाग्दो बनिरहेको छ।
स्लाभियासँगको खेल बार्सिलोनाका लागि सुधारको माग गरिएको ठूलो घन्टी नै हो। हुन त २०१५ मा च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेपछि बार्सिलोनाको कमजोरी यात्रा चलिरहेकै छ। तर हरेक पटक उपाधिको दाबेदार टिमका रुपमा हेरिने क्लबको अहिलेको अवस्था भने नाजुक नै देखिन्छ। दुई वर्षअघि रोमासँग र गएको सिजन लिभरपुलसँग दोस्रो लेगको नाटकीय हारले पनि बार्सिलोना चेतिएको देखिँदैन।
यसैले बार्सिलोनाका डिफेन्डर जेरार्ड पिकेले मंगलबार रातिको खेलपछि भने– ‘यस्तो खेलेर त हामी कहिँ पनि पुग्दैनौँ। च्याम्पियन्स लिग जित्न त अझ धेरै कठिन हुनेछ।’
पिकेकै सेन्टर ब्याक साथी क्लेमेन्ट लेङलेटले पनि छोटो प्रतिक्रिया दिए– ‘यो गाह्रो समय हो।’
ला लिगामा पनि बार्सिलोनाले खेलेका ११ खेलमा ३ खेल हारिसकेको छ। तालिकाको शीर्षमा नै रहे पनि बार्सिलोनाको खेलदेखि फुटबल बुझ्नेहरु खुसी छैनन्। गएको शनिबार लेभान्टेसँग ३–१ ले हारेको खेल त लज्जास्पद नै देखिएको थियो। १ गोलले अघि रहेको अवस्थामा ७ मिनेटमा ३ गोल खाएर हार्नु उपाधि दाबेदार टिमका लागि सुहाउने कुरा होइन।
ला लिगामै एथ्लेटिको बिल्बाओ र ग्रानाडासँग हारेको खेल होस् या ओसासुनासँग बराबरी खेल्दा बार्सिलोन विपक्षी टिमभन्दा हरेक कुरामा बलियो क्लब हो। त्यसैले त्यो हारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रशिक्षक एर्नेस्टो भालभर्देको कमजोर योजनामाथि दोष लागिरहेको छ। च्याम्पियन्स लिगको पछिल्लो दुई सिजन रोमा र लिभरपुलसँगको हारमा भालभर्देले जुन गल्ती गरेका थिए, त्यो अहिले सुरुदेखि नै देखिन्छ।
त्यसमा मेस्सीमाथि टिम धेरै भर पर्नु मात्रै होइन मेस्सी केन्द्रमा राखेरबाहेक अरु कुन योजनामा अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट खाका भालभर्देसँग देखिँदैन। नयाँ सिजनका लागि ल्याइएका स्ट्राइकर एन्टोनी ग्रिजम्यानलाई स्ट्राइकरका रुपमा भन्दा बढी डिफेन्डरका रुपमा देखिएको छ।
राइट ब्याकका सर्जि रोबर्टोलाई कहिले मिडफिल्डमा ल्याइन्छ कहिले अर्का राइट ब्याक नेलसन सेमेडोलाई लेफ्ट ब्याकमा लगिन्छ। भालभर्देलाई मिडफिल्डमै रहेका खेलाडीबीच सन्तुलन मिलाउन समस्या देखिएका बेला डिफेन्सको लाइनअपले थप तनाब दिएको स्पष्ट देखिन्छ। इभान राकिटिक, सर्जियो बुस्केट्स, आर्थर मेलो, कार्लेस एलेना, फ्रान्की डि योङ, आर्टुरो भिडाल जस्ता खेलाडीलाई मिडफिल्डमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने भालभर्देसँग स्पष्ट योजना छैन।
बार्सिलोनाका लागि अझ दुखद कुरा त यो सिजन धेरै गोल खाने टिमहरुमा बार्सिलोना अगाडि नै देखिन्छ। ला लिगाका ११ खेलमा १४ गोल खाइसकेको बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिगका ४ खेलमा २ गोल खाएको छ।
यसको सबैभन्दा ठूलो असर प्रशिक्षक भालभर्देमाथि नै परिरहेको छ। गएको सिजन च्याम्पियन्स लिगको हारपछि समर्थकबाट आइरहेको भालभर्दे हटाउनुपर्ने आवाज अहिले केही फुटबल विश्लेषकहरुले समेत निकालिरहेका छन्। कतिपयले त उनको स्थानमा आउने प्रशिक्षकको नामसमेत दिन थालिसकेका छन्।
‘भालभर्दे आउट’ को नारा सामाजिक सञ्जालमा त धान्नै नसकिने गरी फैलिसकेको छ। यसैले च्याम्पियन्स लिगमा स्लाभियासँगको खेलअघि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नै भालभर्देले क्लबबाट राजीनामा दिने प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो। यसरी नै अघि बढिरहने हो भने भालभर्देको स्थानमा को भन्ने बहस बार्सिलोना ब्यवस्थापनमा नै सुरु हुन धेरै खेल लाग्ने छैन।
प्रशिक्षक भालभर्देले पनि बार्सिलोनामा देखिएका कमजोरी बुझेको बताउँछन्। ‘हाम्रो खेल राम्रो भएको छैन। चाहे शनिबार होस् या आज। हामीले बुझेका छौँ टिममा अझ धेरै दबाब थपिएको छ। यसलाई सुधार गर्नुको विकल्प छैन’ मंगलबारको खेलपछि उनले भने, ‘हरेक टिम जित्नकै लागि खेल्छन्, हामीले बनाएको अवसर सदुपयोग गर्न नसकेको हो। मानिसहरुले बार्सिलोनाले राम्रो गरोस् भन्ने चाहनु सकरात्मक कुरा हो।’
भालभर्देले आलोचना बुझेको जस्तो गरे पनि उनले बार्सिलोनामा देखिएको फुटबलको सुनौलो समयलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। गएको सिजन ला लिगाको उपाधि जिताएर जागिर जोगाएका उनले प्रशिक्षकको खुबी देखाउन भने सकेका छैनन्। अहिले बार्सिलोनामा भालभर्दे तेस्रो सिजन बिताइरहेका छन्। तर बार्सिलोनाको खेलशैलीमा भालभर्देले न त परिवर्तन ल्याउन सकेका छन् न त पछ्याउन नै सकेका छन्।